Qaybo badan oo Mareykanka ka mid ah oo ay duufaani ku dhufatey – XOGMAAL.COM
By MN USA	 On Apr 12, 2019
Digniinta duufaanta shaley ku dhufatey meelo badan oo Mareykanka ayaa horey loo sii bixiyey iyada oo la sheegay in ay tahay mid culus oo dabeyn, baraf iyo roob ba wadata. Gobollada Colorado ilaa iyo Minnesota ayey duufaanto ku habsatey. Halka kuwa koonfureed ee ciimiladoodu kulushahayna aad looga welwelsan yahay in uu dab balaaran qabsado.
Duufaantan barafka iyo dabeylaha isugu jirto ayaa markii labaad dhurbaaxeysa gobollada dhaca bartamaha iyo galbeedka Mareykanka mudo bil gudaheed ah. Walaaca laga qabo fatahaaduna waa mid meel aad usareeysay ka gaarey gobollada loo yaqaan bartamaha galbeedka ee ay Minnesota oo Soomaalida ugu badan Mareykanka ay degan yihiin.
Baraf lixaad leh oo ku habsadey gobollada qaarkood ayaa sababey in uu dub dhac ku yimaado duulimaadyo badan iyo gadiidka dhulka oo ganacsi iyo kuwo dadweynaba isugu jiro. Dugsiyada waxbarashada iyo goobaha shaqada ee dowlada ee aan lagama maarmaanka ahayn ayaa albaabada loo laabey, halka shirkadaha gaarka loo leeyahay qaarkood ay shaqaale badan usoo xaadirin goobahi shaqada.
Muhaajiriin ku xiran gudaha Mareynkanka oo loo wareejinayo magaalooyinka mucaaradka!!